Al-shabaab oo weerar ku qaaday Saldhig ay ku sugnaayeen Ciidamo hubeysan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 4 March 2021
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday Saldhig Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ku leeyihiin degan ka tirsan Magaalada Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Saldhiga la weeraray ayaa waxaa uu ku yaal deegaanka Qarso ee hoostaga Qorofxaraar ee gobolka Wajeer, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Dadka degaanka qaarkood ayaa Warbaahinta waxaa ay u sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay iksu adeegsanayeen labada dhinac, sidoo kale Ciidamada Kenya ay rideen madaafiic xoogan intii uu dagaalka socday.
Saraakiisha Ciidamada Kenya sirasmi ah uma shaacin khasaaraha Ciidamadooda kasoo gaaray dagaalkaas, hayeeshee Al-Shabaab ayaa dhankooda waxaa ay sheegeen inay ka dambeeyeen saldhiga Ciidamada Milalteriga ku leeyihiin duleedka Magaalada Wajeer.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degaanka Qarso ee lagu dagaalamaya ayaa sheegaya in Ciidamada Kenya oo wata Gaadiidka dagaalka ay dhaq dhaqaaqyo Ciidan ka wadaan degaanka lagu dagaalamay.